မောင်သစ်ဆင်းမှ ကွမ်းစာ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
တချို့  အနုပညာသမားတွေ အရက်အသောက်များပြီး
အကြွေစော သွားကြတာကို အရမ်းကို နှမျောတယ်...
ဆရာ မောင်သစ်ဆင်းက ဒီရောက်နေတာ အခုမှသိတယ်... ဆရာက ကွမ်း အစို စားလား
အခြောက်စားလား.. ..မသိ ဈေးကြီးတယ်ဆိုလို့...
ဆရာ မောင်သစ်ဆင်း စကားပြောတာ
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဆရာ မောင်သစ်ဆင်း နဲ့အတူ ဆုတောင်း ရမှာပါပဲ။
စာရေးဆရာတွေ ဘ၀အမောအတွက် အရက်တွေသောက်
သူတို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို စာပေစိစစ်ရေးဆိုတဲ့ ဗုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေ ကဖြတ်တောက် စီးပွားရေးမလုပ်တတ်တဲ့သူတွေကို ထုတ်ဝေသူတွေက ဒုက်ခရောက်အောင်လုပ် ကြောင်နှစ်ကောင် မောင်မျိုးဆိုတဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့သူ ဘယ်လောက်မိုက်ရိုင်းလဲဆို နီကိုရဲ သက်ရှိထင်ရှားရှိချိန် စာအုပ်မထုတ်ဘဲ ညစ်ပတ်ထားပြီး သေမှာသေချာတော့ မသေခင်လေးမှာ ခါတော်မှီ စာအုပ်ထုတ်တယ် တော်တော် မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင် သေတာနဲ့ သူထုတ်တာနဲ့အကိုက် ဖြစ်အောင်ယုတ်မာတာ ရွှေဘုန်း (တာရာမင်းဝေ) လည်းသူညစ်ပက်တယ် စာပေစိစစ်ရေးကြောင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ စာရေးဆရာတွေဟာ အကျင့်ယုတ်တဲ့ ကြောင်နှစ်ကောင်မောင်မျိုးတို့လို ထုတ်ဝေသူတွေကြောင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်နဲ့ပါ ထပ်ပြီးပိတ်ပင်ခံထားသလို ဖြစ်နေတယ် စောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်
မမ ဆရာ့ရဲ့ email ကို အခုလို ဖြူတုတ်တို့နဲ့ share လုပ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနုပညာသမားတွေက ခံစားတတ်ကြလို့လားမသိဘူး စွဲလမ်းတတ်တဲ့ အရက်တို့ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းတို့ တစ်ခုခုတော့ သုံးစွဲနေတတ်ကြတယ်နော်...
အဲဒါတွေသာ ကင်းအောင်နေနိုင်ရင် ပိုပြီး ပိုပြီး အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်ကြမယ်ထင်တယ်... ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ အမလည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပိုလွမ်းသွားပါဦးမယ်။
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့လို့ အမဆိုင်လေး ရောင်းကောင်းပါစေ။ :)
ဆရာ အမေရိကား မှာကိုး။ ဘလော့ဖွင့်ပြီး စာရေးစေချင်လိုက်တာ။ ဝတ္ထုတွေ မရေးနိုင်ရင်တောင် "ကလေးတို့ရဲ့ မနက်ဖြန်လို" ဆောင်းပါးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အရင်က ရေးခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုတို အဟောင်းတွေ တင်စေချင်လိုက်တာ။
(ဒါနဲ့ အပေါ်က ကွန်မန့် တစ်ခုကို ဖတ်တော့ ခေါင်းထဲမှာ ???? တွေ ပေါ်လာတယ်။
အဲဒီ publisher အကြောင်းတော့ ဘာမှ မသိပါဘူး။
ဟိုအရင် ကိုယ့်စာရင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ စာရေးဆရာတွေကို (အတိအကျ ပြောရရင် ၃ ယောက်။ နီကိုရဲ၊ မင်းခိုက်စိုးစံ၊ တာရာမင်းဝေ) သူ့တိုက်က ထုတ်မှ စာရင်းထဲက ဖျက်ချင်စိတ် ပေါက်သွားတော့တယ် ဆိုတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ သူညစ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီလူတွေရေးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာပဲ သူ့အကြောင်း ချစ်စနိုးလိုလို ကျီစယ်နောက်ပြောင်ထားတဲ့ အရေးတွေ ဖတ်ခဲ့ရတော့ ဘာကို နားလည်ရမယ် မသိတော့ဘူး။ ကြောင်မျိုး မောင်နှစ်ကောင် ဆိုတာ အဲဒီစာရေးဆရာတွေစာအုပ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အသုံးပဲ။)
ဆရာသစ်ရေ ကြောက်စိတ် ကို သတိရတယ်။ ဘလော့ဖွင့်ပြီး ရေးပေးပါဦး...
ပြန်မျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အမမချိုသင်း ... ညီမလေးလဲ ပြန်လည်မျှဝေပါရစေ...
ငါ့နှမရေ..email လေးမျှဝေပေးတာ..thank U ပါပဲ..
စဉ်းစားစရာတွေ... အများကြီး ရသွားတယ်...
ဆရာ မောင်သစ်ဆင်း ရဲ့ စာလို့ တွေ့လိုက်တော့ တော်တော် ကိုတုန်လှုပ်သွားရပါတယ်။ ဆရာမောင်သစ်ဆင်း ဟာ ကျွန်တော့် ကို ကောင်းကောင်းဆုံးမပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ ပါ ။ လူကိုယ်တိုင်တော့ မတွေ့ဖူးပါဘူး။
ဆရာ့ရဲ့ ကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကတဆင့်ပါ
ဆရာနီကို ရဲ ကို တော့ လေးစားလျှက်ပါပဲ
in myanmar we all see writers n alcohol.most of writers wrote drinking alcohol is likable.indeed,it isabomb produced by himself that can destroy him.at last ,we can say according to buddha dama "satbay satta kama saga"
နှလုံးသားက ဦးနှောက်ထက်ကြီးလေတော့ ဒီလိုစာမျိုးတွေ
မဖတ်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် မဖတ်ပဲနဲ့ လည်းမနေနိုင်ပါဘူး။ဒီစစ်အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ အုပ်စိုးမှုအောက်
မှာ ကျနော်တို့ ဘက်က လူတော်တွေ အသက်ကို ဥာဏ်မ
စောင့်နိုင်ရှာဘူးလို့ ကြေကွဲရပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ 
ပဲ ကြွေလွင့် ကြွေလွင့် ဒါဟာခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုးနဲ့ အုပ်စိုးသူ
တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။ကျနော်တို့ ကတော့ ချေသော်မကြေ
ထဲကပါပဲ။ ဆရာနီကိုရဲ ကောင်းရာသုဂတိလားပါးစေ။
ကျန်ရှိနေတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဆရာ ဆရာမများအသက်ကို ဥာဏ်စောင့်နိုင်ပါစေ။
စောစောက ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အချက်အလက်မှားနေတယ်လို့ သူငယ်ချင်း တယောက်က ထောက်ပြတာနဲ့။ ပြန်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ သူငယ်ချင်း။
နာမည်ကြားဖူးပေမယ့် သူ့စာတွေ မဖတ်ဖူးဘူး.. ဆရာနီကိုရဲ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
ဆရာမောင်သစ်ဆင်း ခုလိုရေးထားတာဖတ်ရတာ တော်တော်ကြေကွဲစရာကောင်းတာပဲ မရယ်။
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ နီကိုရဲ ၀တ္ထုတွေ ဟန်သစ်မှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အစ်မ မချိုသင်း ရေ စိတ်မကောင်းစရာ နှင့် လွမ်းစရာ၊ တမ်းတစရာ ပို့လေးပါပဲဗျာ.... ကျွန်တော်လည်း ဆရာနီကိုရဲ ပရိတ်သတ်ပါဗျာ.... ကျွန်တော် သူရဲ့စာတွေ အကုန်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဗျာ... တော်တော်များများလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် အခုထိတော့ ဆရာနီကိုရဲ ကိုမမြင်ဖူးသေးဘူးဗျာ.... ဖြစ်နိုင်ရင် ဓါတ်ပုံလေးတင်ပေးပါလားဗျာ... အလွမ်းပြေပေါ့....
အစ်မရေ ဒီဥစ္စာကို ဆြာပီကို ကော်ပီလုပ်ပြီး ပို့ပေးလိုက်တယ်
ဒီစာလေးက လွမ်းစာ အဖြစ်ရော နောက်လူတွေ ဆင်ခြင်ဖို့ အတွက်ပါ မျှော်မြင်ရေးတာမို့တန်ဖိုးသိပ်ရှိပါတယ်… ကိုအောင်မင်းသိမ်းဆုံးသွားတုန်းက ကိုဇဂနာသတိပေးတာလေးကို သတိရတယ်… အနုပညာသည်တွေ အရက်ထဲမျောကုန်ကြတာ ယူကျုံးမရဖြစ်မိတယ်… အရက်နဲ့ အနုပညာ ဘာလို့ များ ပူးတွဲနေရတာလဲလို့ လဲ အားမလိုအားမရတွေးမိတယ် ချိုသင်းရေ… ဟိုးအရင် အမတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ စာပေဟောပြောပွဲလုပ်ရင် အရက်က ဧည့်ခံနဲ့ နေရာမှာ မပါမဖြစ်ဖြစ်နေတော့ ကိုယ်ကလဲ ငယ်သေးတော့ အဖေ့ကိုမေးမိတာ သတိရတယ်… အချင်းချင်းထိန်းသိမ်းကြတာ ပိုကောင်းတာပေါ့ချိုသင်းရယ်… ဒီစာအတွက် ဆရာမောင်သစ်ဆင်းကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်… အလွန်အကျွံသောက်နေကြဆဲ နောင်တော်အကိုစာရေးဆရာတွေလဲ ဒီစာဖတ်မိပါစေလို့ …
ချိူသင်းရေ… အမှန်တကယ်က ဟိုတနေ့ က ချိူသင်းဆီ ကိုကျော်ဝဏမွေးနေ့ လက်ဆောင်ပို့ စ်လေး လာချောင်းတာသိလား… ဘာလက်ဆောင်ပေးဖြစ်သလဲညီမရေ… ကိုကျော်ဝဏ တယောက် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ချစ်တဲ့ဇနီးလေးနဲ့မွေးနေ့ ပေါင်းရာထောင်သောင်းတိုင်ပါစေလို့ … ပြီးတော့ ဆိုင်ခွဲတွေ အများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ ….
မှာ ဆရာနီကိုရဲ နဲ့ interview လေးပါ ။